နောင်ပွင့်တော်မူမည့် အရိမေတ္တေယျ မြတ်စွာဘုရား သမိုင်း – Barnyar Barnyar
နောင်ပွင့်တော်မူမည့် အရိမေတ္တေယျ မြတ်စွာဘုရား သမိုင်း
အရိမေတ္တေယျ ဘုရား ကို ဖူးခွင့်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ…
၁။ ယခုကြုံတွေ့နေတဲ့ ဂေါတမ သာသနာတွင်းမှာ ကိုယ်တိုင် သီလရှင်ဝတ်ပြီး ပရိယတ်၊ ပဋိပတ်သာသနာပြုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်
၂။ မိမိ ရင်မှဖြစ်တဲ့သား၊ သူတစ်ပါးရင်မှ ဖြစ်တဲ့သားတွေကို ရဟန်းခံပေးခြင်း၊ ရှင်ပြုပေးခြင်းပြုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်။
၃။ မိခင်ဖခင်တို့ကို ၀တ်ကျေတန်းကျေမဟုတ်ဘဲ စိတ်ပါလက်ပါ ရိုသေစွာပြုစုလုပ်ကျွေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်။
၄။ သရဏဂုံ သီလ မပြတ် ဆောက်တည်သော ပုဂ္ဖိုလ်။
၅။ ဘုရားသာသနာ တည်စိမ့်သောဌာ စေတီ၊ ပုထိုး၊ စည်းခုံ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း ဇရပ် စသည်တို့ကို ပြုပြင်တဲ့ပုဂ္ဖိုလ်၊ အသစ်ဆောက်လုပ်လှူးဒါန်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်။
၆။ ဗောဓိညောင်ပင် စိုက်ပျိုးသောပုဂ္ဂိုလ် ညောင်ရေသွန်းလောင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်။
၇။ ရေတွင်း ရေကန် ရေအိမ် စတုဒီသာ ကျောင်းဇရပ် တံတား ပြုပြင်သောပုဂ္ဂိုလ် အရုဏ်ဆွမ်း နေ့ဆွမ်း လောင်လှူသော ပုဂ္ဖိုလ်။
၈။ ရဟန်း တို့အား ပစ္စည်းလေးပါး လှူဒါန်းထောက်ပံ့သော ပုဂ္ဂိုလ်။
၉။ ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာ ပွားများအားထုတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်လ်
အားလုံး ဧကန်မုချ မြေကြီး လက်ခတ်မလွဲ၊ အရိမေတ္တေယျဘုရားရှင်ကို ဖူးမြော်ရပြီး နိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ တကယ်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင် ဟောဒီကမ္ဘာမှာ နောင်ပွင်တော်မူမဲ့ မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကို သိချင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် တချို့လည်း သိပြီးဖြစ်နေကြမှာပါ မသိရသေးတဲ့ သူတွေအတွက် ဒီပိုစ့်လေးကိုတင်လိုက်တာပါ ဒီမေးလ်လေးကို ပို့ပေးတဲ့ အရှင်ဝိမလ၀ံသကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်ဘုရား။ နောင်ပွင့်တော်မူမည့် အရိမေတ္တေယျဘုရားရှင် ကို ရှိခိုးကန့်တော့လိုက်ပါတယ် ဘုရား
ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်သောဟောဒီကမ္ဘာမှာဘုရားငါးဆူပွင့်မယ်လို့ မှတ်သားကြားသိဖူးပါတယ် အခုဘုရားလေးဆူးပွင့်ထွန်းပြီးပါပြီ နောင်ပွင့်လတ္တံသော မြတ်စွာဘုရားမှာ အရိမေတ္တေယျဘုရားရှင် ဟုသိရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းက နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါတယ် အလွန်ကြည်ညိုစရာကောင်းသောဘုရားရှင်ရဲ့ တရားတော်အားနာကြားပြီး ရှေ့တော်မှာတင်ကျွတ်တမ်းဝင် နိဗ္ဗာန်စံရမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။”
အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တိုဘုရားရှင် ဟေားကြားခဲ့သည့်အတိုင်း လိုက်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ် …သုံးချက်ထဲပါ
၁။ မကောင်းမှု ကိုရှောင်ရမယ် ။
၂။ ကောင်းမှု ကိုဆောင်ပြီးအစဉ်ပြုလုပ်နေရမယ် ။
၃။ စိတ်ကို ဖြူစင်အောင်ထားရပါမယ် ။
ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားရှင်က ကပ္ပိလဝတ်ပြည် နိဂြောဓာရုံကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့အချိန် အရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ လျှောက်ထားချက်အရ အရဟတ္တဖိုလ်ဈာန်သမာပတ် ဝင်စားပြီး အဇိတရဟန်း နောင်အနာဂတ်ကာလမှာ အရိမေတ္တေယျဘုရား ဖြစ်တော်မူမည့်အကြောင်းကို ဟောကြားတော် မူပါတယ်။ အရိမေတ္တေယျဘုရားလောင်းက တစ်သင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း ပါရမီတွေဖြည့်ကျင့်ပြီး တုသိတာနတ်ပြည်မှာရှိနေမယ်။
အလောင်းတော်နတ်သားက လူ့ပြည်ကိုဆင်းပြီး ပဋိသန္ဓေနေဖို့ရာအတွက် ဘုရားလောင်းတို့ရဲ့ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာ ဓမ္မတာအရ ပဋိသန္ဓေယူတော့မယ်ဆိုရင် ကြည့်ခြင်းငါးပါး အရင်ကြည့်ပြီးမှ ပဋိသန္ဓေယူလေ့ရှိကြတယ်။
၁။ ဘုရားဖြစ်မည့်ခေတ်အခါကာလကား အနှစ်တစ်သိန်းမှစပြီး အောက်ဖြစ်သောကာလ အနှစ်တစ်ရာတန်းမှစပြီး အထက်ဖြစ်သောကာလ (တစ်သိန်းနှင့် တစ်သိန်းအောက်- ၁၀၀အထက်)
၂။ ဘုရားဖြစ်ရာကျွန်းကား ဇမ္ဗူဒိပ်ကျွန်း
၃။ ဘုရားပွင့်ရာဒေသကား မဇ္ဈိမဒေသ
၄။ ဘုရားလောင်းဖြစ်ရာ အမျိုးကား မင်းမျိုး ပုဏ္ဏားမျိုး
ကေတုမတီပြည်………..သင်္ခစကြဝတေးမင်းနှင့်တိုင်ပင်ကြံစည်ဘက်ကိုးကွယ်ရာဖြစ်သော အတိတ် အနာဂတ်ကိုသိမြင်နိုင်ပြီးပစ္စုပန်သံသရာအစီးအပွားကို ဆုံးမတတ်သော သုဗြဟ္မပုဏ္ဏားကြီး၏ ဗြဟ္မဏဝတီပုဏ္ဏေးမဝမ်းမှာ ပဋိသန္ဓေနေလိမ့်မည်။
ဗြဟ္မဏဝတီပုဏ္ဏေးမဝမ်းမှာဆယ်လပြည့်တဲ့အခါမှာ ဣသိပတေနသမင်တောမှာ မယ်တော် ဗြဟ္မဏဝတီသည်ထိုင်လျက်လည်းမဟုတ် အိပ်လျက်လည်းမဟုတ်ဘဲ ရပ်လျက်သာလျှင် သစ်ပင်၏အကိုင်းအခက်ကိုကိုင်လျက် မေတ္တေယျကိုဖွားတော်မူလိမ့်မည်။ဘုရားလောင်းနဲ့အတူ တစ်ချိန်တည်းဖွားတော်မူတဲ့ဖွားဘက်တော် ၁၈ ကုဋေအားလုံးအမတ်တွေချည်းဖြစ်မယ်။ အဇိတဟူသောအမည်ကိုသာပေးလိမ့်မယ်။ ဘုရားလောင်းအဇိတမင်းသားဟာဖွားလျှင်ဖွားချင်း ခုနစ်ဖဝါးလှမ်းပြီး ခြေတော်ချတိုင်းချတိုင်း ကြာပွင့်တွေပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်။
ဖွားလျှင်ဖွားချင်း ခုနစ်လှမ်းလှမ်းပြီး ယခုဘဝကား ငါ့အဖို့နောက်ဆုံးဘဝတည်း နောက်ထပ်ဘဝမရှိတော့ပြီ အာသဝေါကင်းသည် ဖြစ်သောကြောင့်ငြိမ်းအေးလတံ္တ့” ဟူသောစကားကိုအရပ်လေးမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးပြောဆိုလိမ့်မယ်။
အဇိတမင်းသားလောကစည်းစိမ်ခံစားဖို့ရာနေမင်း၏ရောင်ခြည်ကဲ့သို့လူသားတွေမျက်စိဖြင့်စိန်းစိန်းမကြည့်ဝံ့တဲ့ အရောင်တလက်လက်ဖြင့် ရတနာအရောင်ထွန်းလင်းပြောင်တဲ့တင့်တယ်ခံ့ညားသောပြာသာဒ်လေးဆောင်ပေါ်ပေါက်လာလ်ိမ့်မည်။ပြာသာဒ်လေးဆောင်ကို တစ်ဆောင်မှာ ပရိဘောဂအသုံးအဆောင် အပြည့်အစုံပါတဲ့တိုက်ခန်းက ခုနစ်ထောင်စီ တစ်ဖက်တစ်ဖက်မှာ ပတ္တမြားကျောက်မျက်ရွဲစီသောနဝရတ်ကိုးပါးနဲ့ ပြည့်စုံသော ပလ္လင်ခုနစ်ထောင်စီ ရတနာခုနစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသော ထီးဖြူခုနစ်ထောင်စီ ခုတင်ညောင်စောင်းခုနစ်ထောင်စီ ပြာသာဒ်တစ်ဆောင်ကို တိုက်ခန်းက
ခုနစ်ထောင်စီဆိုတော့ ပြာသာဒ်လေးဆောင်ဆိုရင် တိုက်ခန်းပေါင်း ၂၈၀၀၀ ရှိမယ်။ ပြာသာဒ်တစ်ဆောင်တစ်ဆောင်ကို ရွှေအိုးကြီးကတစ်လုံးစီ။
ရွှေအိုးတစ်လုံးစီရဲ့အဝကား တစ်ယူဇနာကျယ်မယ်။ ရွှေအိုး၏အမောက်ကား မြေကြီးနဲ့အမျှအောက်မြေကြီးအဆုံးထိ သုံးလို့မကုန်ဘူး။ ဒါတင်မကသေးဘူး
ရွှေအိုးတစ်လုံးစီမှာ ပဒေသာပင်ကြီးခြောက်ပင်စီ ပေါက်လိမ့်မယ်။ ပြာသာဒ်တစ်ဆောင် တစ်ဆောင်မှာ ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းခုနစ်ထောင် လောဟကသိန္ဓောမြင်း တစ်ထောင်ဖြင့် မောင်းနှင်ရသောရထားခုနစ်ရာ မောင်းမပေါင်းတစ်သောင်းခြောက်ထောင်က ဆိုတီးမှုတ်ဖြေဖျော်ဖို့ရာ
အချိန်တန်လို့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါ စန္ဒမုက္ခီအမျိုးသမီးနဲ့အိမ် ထောင်ပြုလိမ့်မည်။ စန္ဒမုက္ခီအမျိုးသမီးကလည်း သူမတူ နတ်သမီးတမျှအလွန်လှပပြီး သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနံ့ကား စန္ဒကူးသရက္ခန်အနံ့လိုမွှေးကြိုင်နေမယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အသားကလည်း ဝါဂွမ်းကဲ့သို့ နူးညံ့မယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အရောင်က ဆယ့်နှစ်တောင်အတွင်း မီးမထွန်းဘဲ အရောင်တဝင်းဝင်းထိန်နေမယ်။ အရိမေတ္တေယျဘုရားရှင်ဟာဘယ်လောက်ဘုန်းကြီးလိုက်မလဲဆိုတာ ရှင်ဘုရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ အဇိတမင်းသားဘဝလောက်ရှိတာတောင်မှသင်္ခစကြဝတေးမင်းနှင့်တကွ မြို့ပေါင်းရှစ်သောင်းလေးထောင်က ရှင်ဘုရင်တွေနတ်သားတွေက ဝေယျဝစ္စလုပ်ပေးချင်လို့ပြုလုပ်ခွင့်ပေးဖို့လာပြီးတောင်းပန်ကြတယ်တဲ့။ အဇိတမင်းသားက အကျွန်ုပ်မှာ ဖွားဘက်တော် ၁၈ ကုဋေအမတ်ကြီးနှင့်တကွ ဆင်မြင်းရဲမက်ဗိုလ်ပါတွေ ရှိပါတယ်။ အလိုမရှိတော့ပါဟု ပြောလွှတ်လိမ့်မယ်။
အဇိတမင်းသားဟာ ပြသာဒ်လေးဆောင်မှာ လောကီစည်းစိမ်ခံစားနေစဉ်မှာ အနှစ်တစ်သောင်းပြည့်တဲ့အခါကျရင် ဗြဟ္မာဝံသ ဆိုတဲ့
ဗြဟ္မာဝံသ သားယောကျာ်းလေးမွေးဖွားပြီးတဲ့အခါ ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ဓမ္မတာအရ ဥယျာဉ်ကထွက်စဉ်မှာ သူအို သူနာ သူသေ ရဟန်း
နိမိတ်ကြီးလေးပါးတွေ့မြင်ရရင် သံဝေဂတရားတွေရလာပြီးတော့ တောထွက်မည့်အကြံဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဒိဗျာဝဒါန မေတ္တေယျဗျာကရဏဝဒါန (၃၆-၃၇) မှာပြဆိုထားတာကတော့ သင်္ခမင်း၏ ယဇ်တိုင်အပိုင်းပိုင်းပြတ်သည်ကို မြင်ရပြီး သံဝေဂဖြစ်ပြီးတောထွက်လိမ့်မည်လို့ပြဆိုထားတာရှိသေးတယ်။ ဘယ်လိုပုံနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် တောကတော့ထွက်မှာပါပဲ။ အဇိတမင်းသား တောထွက်မယ့်အကြံစိတ်ကို သင်္ခစကြဝတေးမင်းက သိတဲ့အခါ အဇိတမင်းသားပျော်အောင်ဆိုပြီးတော့ ရှစ်သောင်းလေးထောင်သော ကချေသည်တွေမြို့သူ မြို့သား နိဂုံးဇနပုဒ်သူ မင်းသားမင်းမြေး သူဌေး သူကြွယ်စသော လူအပေါင်းတို့က ပန်းနံ့သာစွဲလျက် အဇိတမင်းသားကို ခြံရံပြီးနေကြလိမ့်မယ်။ နတ်ဗြဟ္မာတွေကလည်း နတ်တို့ရဲ့ ထီး တံခွန် ပန်းနံ့သာ ရွှေပေါက်ပေါက် ငွေပေါက်ပေါက် စသည်တို့ဖြင့် ဘုရားလောင်းပြာသာဒ် မိုးကြီးရွာသကဲ့သို့ အပြည့်အလျှံခြံရံခစားနေကြလိမ့်မယ်။ လူ့ဘဝကာမဂုဏ်ထဲမှာပျော်အောင်ဖြေဖျော်နေကြတာ။
အဇိတမင်းသား တောထွက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်အကြံကို သင်္ခစကြဝတေးမင်းနှင့်တကွ တိုင်းသူပြည်သား လုတွေအားလုံးသိသွားကြတဲ့အခါမှာ ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက် ဘယ်အချိန်မှာ အဇိတမင်း တောထွက်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအသံကို အားလုံးသိသွားကြတော့ နန်းတွင်းသူ နန်းတွင်းသား မြို့သူမြို့သားတွေ တောရွာဇနပုဒ်က လူတွေ မင်းသား မင်းမြေး သူဌေး သူကြွယ်အစရှိတဲ့ လူပေါင်းများစွာနှင့်တကွ စန္ဒမုက္ခီ သားတော် ဗြဟ္မာဝံသ အလုပ်အကျွေးကချေသည်တွေရော အဇိမင်းရဲ့ ပြာသာဒ်ထဲမှာ တောထွက်ရင်လိုက်ဖို့ရာအတွက်ပြည့်လျှံပြီးတော့နေမယ်။ တောထွက်မည့် အချိန်လည်းရောက်ရော လူပေါင်းများစွာပြည့်နေတဲ့ ပြာသာဒ်ကြီးဟာ ဘုရားလောင်းတန်ခိုးတော်ကြာင့်လည်းကောင်း စကြဝတေးမင်းအာဏာကြောင့်လည်းကောင်း နတ်ဗြဟ္မာတို့ တန်ခိုးတော်ကြောင့်လည်းကောင်း ဟသာင်္မင်းပျံသကဲ့သို့ ကောင်းကင်ယံသို့ပျံတက်ပြီး ကံ့ကော်ပင်ရှိရာအရပ်သို့ ကောင်းကင်ယံခရီးဖြင့် တောထွက်သွားကြလိမ့်မယ်။ နတ်ဗြဟ္မာများ ပို့ဆောင်ခြင်း ကောင်းကင်ယံ ဟသာင်္ပျံ ပြာသာဒ်ကြီးကို ဗြဟ္မာမင်းက သုံးယူဇနာ ရှိသောထီးကိုကိုင်ပြီး လိုက်မယ်။ သိကြားမင်းက အတောင်ခြောက်ဆယ်ရှိသော လက်ယာရစ် ခရုသင်းကိုကိုင်လျက် သာဓု သုံးကြိမ်ခေါ်ပြီးလိုက်မယ်။ သုတဝံနတ်သားက သားမြီးယပ်ကိုကိုင်ပြီးလိုက်မယ်။ တုသိတာနတ်သားက ပတ္တမြားယပ်ကိုကိုင်ပြီးလိုက်မယ်။ ပဉ္စင်္သိခနတ်သားက စောင်းကိုကိုင်မယ်။ လောကပါလနတ်သားလေးယောက်က သန်လျက်ကိုကိုင်မယ်။ နှစ်သိန်းရှစ်သောင်းရှိတဲ့ ဘီလူးစစ်သည်တွေက လက်နက်ကိုယ်စီကိုင်မယ်။ နတ်သမီးတွေက ရတနာပုဋောင်းကိုကိုင်မယ်။ အသူရာနတ်တို့က သီချင်းဆိုပြီးတော့ နတ်တို့၏ တံခွန်ကိုကိုင်မယ်။ နတ်မင်းတို့က ပတ္တမြားရှိသော ဆီမီးကိုကိုင်မယ်။ ဂဠုန်တို့က စောင်းတီးလိုက်မယ်။ ဂန္ဓဗ္ဗနတ်တို့က စောင်းတီးပြီးလိုက်မယ်။ ဟသာင်္ပျံကောင်းကင်ပြာသာဒ်ထဲမှာ တောထွက်လို့ လိုက်ကြမည့် ပရိသတ်တွေက ရှစ်သောင်းလေးထောင်တဲ့။ ကောင်းကင်ယံပြာသာဒ်ပျံနဲ့ ဆွေစုံမျိုးစုံ သားနဲ့ မယားနဲ့ ရှစ်သောင်းလေးထောင်ပရိသတ်နဲ့ အခြံအရံနဲ့ ကောင်းကင်ခရီးဖြင့် ကံ့ကော်ပင်ရှိရာသို့ တောထွက်မှာ။ အရိမေတ္တေယျဘုရားရှင်ဟာ ကံ့ကော်ပင်အောက်မှာပွင့်မှာပါ။ ကံ့ကော်ပင်ဆီရောက်တဲ့အခါမှာ အဇိတမင်းသားက ကံ့ကော်ပင်အောက်မှာ ဒုက္ကခရစရိယာကို ကျင့်တော်မူပါမယ်။ အဇိတမင်းသားဟာ ဒုက္ကခရစရိယာကို ခြောက်ရက်ကျင့်တော်မူရုံမျှနဲ့ ဘုရားစင်စစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ စန္ဒမုက္ခီမိဖုရားက အဲဒီနေရာမှာပဲ နတ်သြဇာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ နွားနို့ဆွမ်းလှုလိမ့်မယ်။
ညနေချမ်းအချိန်ရောက်သည့်အခါ ကံ့ကော်ပင်နဲ့ မနီးမဝေး ရတနာခုနစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ အမြင့် ၆၄တောင်ရှိတဲ့ ရွှေပလ္လင်ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်။ ထိုရွှေပလ္လင်အထက်ဝယ် ထက်ဝက်ဖွဲ့ခွေထိုင်နေတော်မူလျက် အရှေ့လောကဓာတ်ကိုကြည့်ပြီး နတ်ပရိသတ်နဲ့ လူပရိသတ်တွေခြံရံလျက် မာရ်နတ်ရဲ့ရန်ကိုအောင်မြင်လိမ့်မယ်။ ညဉ့်ဦးယံမှာ ပုဗ္ဗေနိဝါသနုဿတိဥာဏ်ကိုရမယ်။ သန်းခေါင်ယံအချိန်မှာ ဒိဗ္ဗစက္ခုဥာဏ်ကိုရမယ်။ မိုးသောက်ယံအချိန် အာသဝက္ခယဥာဏ်တွေရပြီးတော့ နေဝန်းကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ သစ္စာလေးပါးကိုသိပြီး သဗ္ဗညုတဥာဏ်ကိုရမယ်။
ဘုရားပွင့်တဲ့ကံ့ကော်ပင်ရဲ့ လုံးပတ်က အဲဒီခေတ်အခါမှာ လူတွေရဲ့ အတောင်နဲ့ အတောင်ခုနစ်ဆယ်ရှိမယ်။ အကိုင်းအခက် ကိုးကိုင်း ခက်မကိုးဖြာလို့ခေါ်တယ်။ ကံ့ကော်ပင်ရဲ့ အနံ့တွေက လေအောက်ကိုဆယ်ယူဇနာ လေအထက်ကို ဆယ်ယူဇနာမွှေးမယ်။ ကံ့ကော်ပွင့်တွေက နွားလှည်းဘီးလောက်ကြီးမယ်။ ဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီး ပွင့်ကြတဲ့ ကံ့ကော်ပွင့်တွေဟာ ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့နေ့ကျမှ ကြွေကြတော့မှာ။ အဲဒီကံ့ကော်ပင်ကို ဘယ်ငှက်မှ မနားဝံ့ကြဘူး။ ဖြတ်ကျော်မပျံ့ဝံ့ကြဘူး။ ကံ့ကော်ပင်းနားရောက်တဲ့ငှက်တိုင်း သတ္တဝါတိုင်း ကံ့ကော်ပင်ကို လက်ယာရစ်သုံးပတ်ပတ်ပြီးမှ သွားကြလိမ့်မယ်။ ဗြဟ္မာမင်းက တရားဟောရန် တောင်းပန်ခြင်း အဲဒီကံ့ကော်ပင်ရဲ့ အနီးအနားမှာပဲ သီတင်းသုံးနေတဲ့အချိန် လေးဆယ့်ကိုးရက်ကျော်လွန်တဲ့အခါ ပွင့်တော်မူသွားကြတဲ့ ဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ ဗြဟ္မာမင်းကြီးရဲ့လောကဂရုကို ခံယူမယ်။ ဗြဟ္မာမင်းကတောင်းပန်မှ တရားဟောရတာက ပွင့်တော်မူသွားကြတဲ့ ဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့ ဓမ္မတာဖြစ်လို့ ဟောရတာ။ ဘုရားမပွင့်မီ ဗာဟိရကာလမှ လူဝတ်ကြောင်များ ရသေ့ ပရိဗိုဇ် ရဟန်း ပုဏ္ဏားတို့တွေဟာ ဗြဟ္မာတွေကိုသာ အလေးဂရုပြု ကိုးကွယ်နေကြတာ။ တလောကလုံးက အလေးအမြတ်ပြုသော ဗြဟ္မာကြီးက မြတ်စွာဘုရားအား အလေးပြု ညွှတ်တွားကိုင်းရှိုင်းလာလျှင် တစ်လောကလုံးပင် မြတ်စွာဘုရား ကို အလေးပြုညွှတ်တွားကိုင်းရှိုင်းလာလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို လောကဂရု ယူလိုက်တာလို့ခေါ်တယ်။
ဗြဟ္မာမင်းထံမှ တရားဟောရန်ဝန်ခံပြီးပြီဆိုလျှင်ပဲ ဣသိပတနဥယျာဉ်တောသို့ ဓမ္မစကြာတရားဟောဖို့ရန်ကြွလိမ့်မယ်။ ဘုရားရှင်ခြေတော်အစုံကို ခံအံ့သောငှာ မြေကြီးကိုခွင်းပြီး အတောင်သုံးဆယ်ရှိတဲ့ ကြာပွင့်ကြီး ၂၄ တောင်ရှိတဲ့ ကြာပွင့်ငယ်တွေက ဘုရားရှင်ခြေချတိုင်း ခြေချတိုင်း ပွင့်ပေးလိမ့်မယ်။ လူပရိသတ် ရှစ်ယူဇနာ နတ်ပရိသတ် စကြာဝဠာတိုက်အပြည့် ဗြဟ္မာပြည်အထက်ဆုံး အကနိဋ္ဌဘုံတိုင်အောင် ပရိသတ်တွေကို ထန်းသီးလုံးလောက်ကြီးသော ရောင်ခြည်တော် ခြောက်ပါးလွှတ်ပြီး ဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့အခါမှာ လူပုဂ္ဂိုလ် ကုဋေတစ်သိန်း နတ်ဗြဟ္မာတွေက ကုဋေတစ်သိန်း ကျွတ်တမ်းဝင်ကြလိမ့်မယ်။
ဘုရားရှင်၏တန်ခိုးတော်ကြောင့် ရွှေပန်းဆိုင်း ငွေပန်းဆိုင်း ပုလဲပန်းဆိုင်း သန္တာပန်းဆိုင်းတို့ဖြင့် တန်ဆာဆင်လျက် ရတနာခုနစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံပြီး ဆယ့်နှစ်ယူဇနာကျယ်ဝန်းတဲ့ ဗိမာန်မျက်နှာကျက်သည် ဓမ္မစကြာတရားဦးဟောသည့်နေ့မှစပြီး ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံသည့်တိုင်အောင် နေ့ညအမြဲပင်လိုက်ပါပြီး မျက်နှာကျက်အဖြစ် မိုးကာပြီးနေမယ်။ အရိမေတ္တေယျဘုရား နေသန့်စင်သောအခါ နေဖို့ရာအတွက် မြေကြီးတို့ကိုခွဲပြီး ရတနာသုံးပါးနှင့်ပြည့်စုံသော ၁၂ ယူဇနာကျယ်ဝန်းတဲ့ ရွှေမဏ္ဍပ်ကြီးပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်။ ဘုရားရှင်တန်ခိုးတော်ကြောင့် မိတာန်ပန်းဆိုင်း တုရင်တိုင် ထီး တံခွန် ဆီမီး တန်ဆောင်း ရတနာမဏ္ဍပ်ကြီးဟာ ဘုရားရှင်တရားဟောရာ ဌာနတိုင်းမှာ အိမ်မှာဟောမယ်ဆိုရင် အိမ်ပေါက်ဝ ကျောင်းမှာဟောမယ်ဆိုရင် ကျောင်းပေါက်ဝ မြို့မှာဟောမယ်ဆိုရင် မြို့မှာ တောမှာဟောမယ်ဆိုရင် တောမှာ စတဲ့ ဟောတဲ့နေရာတိုင်းမှာ ကောင်းကင်ယံကနေပြီး အမြဲတမ်း ပရိနိဗ္ဗာန်စံအထိ လိုက်ပါနေမှာ။
အရိမေတ္တေယျ ဘုရား တရားဟောတဲ့အခါ ဘယ်မြို့ ဘယ်ဒေသ ဘယ်အရပ် ဘယ်ရွာဒေသ ဇနပုဒ် အိမ်ကပဲဟောဟော စကြဝဠာတိုက်တစ်သောင်းလုံး ဘုရားရှင်ရဲ့ တရားဟောအသံကိုကြားနေရမယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်ကိုလည်းမြင်နေရမယ်။ ရုပ်လည်းမြင်ရမယ် အသံလည်းကြားရမယ်။ မမြင်ချင်လို့ မျက်စိမှိတ်ထားလည်း မရဘူး။ မကြားချင်လို့နားပိတ်ထားလည်းမရဘူး။ ဘုရားရှင်ရဲ့တန်ခိုးတော်ကြောင့် ၃၁ ဘုံအကာအရံမရှိ ဖီလာထုတ်ချင်းပေါက်မြင်ကြရမှာ။ အပေါ်ကြည့်ရင် နတ်သား နတ်သမီး ဗြဟ္မာတွေမြင်ရမယ်။ အောက်ငုံ့ကြည့်ရင် ငရဲပြည်မှာ ခံစားနေရတဲ့ ငရဲဒုက္ခမျိုးစုံကိုမြင်ရတော့ ငရဲရောက်အောင် အကုသိုလ်တွေပြုရဲဖို့မရှိတော့ဘူး။ အရိမေတ္တေယျဘုရားရှင်ရဲ့တန်ခိုးတော်ကြောင့် ယောကျာ်းဆိုရင် နတ်သားလို မိန်းမဆိုရင် နတ်သမီးလို ချောမောလှပတွေချည်းဖြစ်ရာ ရုပ်မချော အင်္ဂါမစုံတစ်ယောက်မှမရှိ။ အကုန်းအကွ အကန်း အနူအဝဲရောဂါသည်တွေ လုံးဝမရှိ။ အသက်ငါးရာပြည့်တဲ့အရွယ်ရောက်ရင် အမျိုးသား အမျိုးသမီးတွေ အိမ်ထောင်ပြုကြလိမ့်မယ်။ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး ခိုက်ရန်ဒေါသမရှိ ပြဿနာမရှိ ကွဲကွာသွားခြင်းလည်းမရှိ။ အမြဲအဆင်ပြေမယ်။ ရာသက်ပန်ပေါင်းသင်းရမယ်။ အမျိုးသမီးတိုင်းမှာ ပတ္တမြားနားတောင်း လက်စွပ် လက်ကောက် ခြေကျင်းစသည်တို့ဟာ ရွှေအိုးကြီးတွေထဲက ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ယူဝတ်ကြမှာ။ ရွှေမဝတ်နိုင်တဲ့သူမရှိဘူးတဲ့။ စားစရာပဒေသာပင်တွေမှာ ယူစားချင်တဲ့အချိန်ယူစားလို့ရတယ်။ ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ဘာရောဂါမှကိုမရှိဘူး။ နေ့ညခွဲမရ အရိမေတ္တေယျဘုရားရှင်ရဲ့ တန်ခိုးတော်ကြောင့် ကမ္ဘာလောကြီးဟာ နေ့အခါ ညအခါရယ်လို့မရှိ နေ့ရောညပါ အမြဲတမ်းလင်းထိန်ပြီးတော့ မနက်ပွင့်တဲ့ပန်း ညပွင့်တဲ့ပန်း မနက်ပန်း ညပန်း ကြက်တွန်သံတွေကို ကြည့်ရှုနားထောင်ပြီး နေ့ညခွဲယူရလိမ့်မယ်။ ပရိနိဗ္ဗာန်စံမည့်အရွယ် မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီး ကုဋေခုနစ်ရာသော ပရိသတ်တို့ကို ချေချွတ်တော်မူပြီးလျှင် အနှစ်ရှစ်သောင်းပြည့်တဲ့အချိန်မှာ
ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သာသနာတော်က အနှစ်နှစ်သိန်းခြောက်သောင်း ပြည့်တဲ့အခါ ဘဒ္ဒကမ္ဘာကြီးသည် အချိန်တန်လျှင် ပျက်ပြီး ကမ္ဘာတစ်သိန်းကာလလုံး ဘုရား မပွင့်တော့ဘူးတဲ့။ ဘုရားမပွင့်တဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းကျော်လွန်သောအခါ မဏ္ဍကမ္ဘာဖြစ်ပြီးတော့ ဥတ္တရာမမင်းသည် ရာမသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်။ ပသေနဒီကောသလမင်းက ဓမ္မရာဇာဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဲဒီ မဏ္ဍကမ္ဘာမှာဘုရားနှစ်ဆူပွင့်ပြီးပျက်စီးသွားတဲ့အခါ သာရကမ္ဘာဖြစ်ပေါ်ပြီး အဘိဘူဘုရားတစ်ဆူသာပွင့်လိမ့်မယ်။ သာရကမ္ဘာပျက်ပြီး ကမ္ဘာတစ်သိန်းဘုရားမပွင့်ဘဲနေပြီးတော့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းကျော်လွန်သောအခါ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ကမ္ဘာများမှာ ဒီဃသောနိအသူရိန်နတ်သား စန္ဒနီပုဏ္ဏား၊ သုဘလုလင် တောဒေယျပုဏ္ဏား ၊ နာဠာဂီရိဆင်မင်း ပလလေယဆင်မင်းတို့ အစဉ်အတိုင်း ဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်။ အရိမေတ္တေယျဘုရားဖူးမြော်ရန် ပြုလုပ်ရမည့်ကုသိုလ် ယခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား သာသနာကာလအတွင်းမှာ ကိုယ်တိုင် ရဟန်းသာမဏေ သီလရှင်ဝတ်ပြီး ပရိယတ် ပဋိပတ် သာသနာပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် မိမိရင်မှဖြစ်တဲ့သား သူတစ်ပါးရင်မှဖြစ်တဲ့သားတွေကို ရဟန်းခံပေးခြင်း ရှင်ပြုပေးခြင်းပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တွေကို ဝတ်ကျေတမ်းကျေမဟုတ်ဘဲ စိတ်ပါလက်ပါပြုစုလုပ်ကျွေးသောပုဂ္ဂိုလ် သရဏဂုံသီလမပြတ်ဆောက်တည်သောပုဂ္ဂိုလ် ဘုရားသာသနာတည်စိမ့်သောငှာ စေတီပုထိုး စည်းခုံ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း ဇရပ်စသည်တို့ကို ပြုပြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အသစ်ဆောက်လုပ်လှုဒါန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဗောဓိညောင်ပင်စိုက်ပျိုးသောပုဂ္ဂိုလ် ညောင်ရေသွန်းလောင်းသောပုဂ္ဂိုလ် ရေတွင်း ရေအိုင် ရေကန် စတုဒိသာကျောင်းဇရပ် တံတာြး့ပုပြင်သောပ္ဂုိုလ် အရုဏ်ဆွမ်း နေ့ဆွမ်းမပြတ်လောင်းလှုသောပုဂ္ဂိုလ် ရဟန်းတို့အားပစ္စည်းလေးပါးတို့ဖြင့်ထောက်ပံ့လှုဒါန်းသောပုဂ္ဂိုလ် ကမ္မဌာန်းဘာဝနာပွားများအားထုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်…. အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံး ဧကန်မုချ မလွဲမသွေ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ အရိမေတ္တေယျမြတ်စွာဘုရားကို ဖူးမြော်ရပြီး နိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်။ အဲဒါက ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောပြခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
အရိမေတ္တေယျ မြတ်စွာဘုရား လောင်းပြောပြခဲ့တဲ့ ကုသိုလ် တွေကတော့….. မဟာဝေသန္တရာဇာတ်တော်ကို နေ့ချင်းကုန်အောင်နာကြားကြသောသူတို့သည် ကျွန်ုပ်ဘုရားမဖြစ်မီအကြား သံသရာ၌ ကျင်လည်လေသမျှမှာလည်း စိတ်နှင့်ကိုယ်ကို အစိုးရ၍ လူကောင်း နတ်ကောင်း စည်းစိမ်ကောင်းကို ခံစားရပြီး ကျွန်ုပ်ဘုရားဖြစ်သောအခါ ရှေးဦးစွာ ဖူးတွေ့ရ၍ ပဋိသမ္ဘိဒါပညာလေးပါးနှင့်တကွ ရဟန္တာ အဖြစ်ကို မချွတ်မလွဲရနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ ရှင်မာလဲမထေရ်မြတ်အား အရိမေတ္တေယျမြတ်စွာဘုရားလောင်းက ပြောပြတော်မူခဲ့ပါတယ်။
နောငျပှငျ့တျောမူမညျ့ အရိမတ်ေတယြေ မွတျစှာဘုရား သမိုငျး ..!
အရိမတ်ေတယြေ ဘုရား ကို ဖူးခှငျ့ရမညျ့ ပုဂ်ဂိုလျမြား…
၁။ ယခုကွုံတှနေ့တေဲ့ ဂေါတမ သာသနာတှငျးမှာ ကိုယျတိုငျ သီလရှငျဝတျပွီး ပရိယတျ၊ ပဋိပတျသာသနာပွုတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျ
၂။ မိမိ ရငျမှဖွဈတဲ့သား၊ သူတဈပါးရငျမှ ဖွဈတဲ့သားတှကေို ရဟနျးခံပေးခွငျး၊ ရှငျပွုပေးခွငျးပွုတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျ။
၃။ မိခငျဖခငျတို့ကို ဝတျကတြေနျးကမြေဟုတျဘဲ စိတျပါလကျပါ ရိုသစှောပွုစုလုပျကြှေးတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျ။
၄။ သရဏဂုံ သီလ မပွတျ ဆောကျတညျသော ပုဂ်ဖိုလျ။
၅။ ဘုရားသာသနာ တညျစိမျ့သောဌာ စတေီ၊ ပုထိုး၊ စညျးခုံ ဥမငျလိုဏျခေါငျး ဇရပျ စသညျတို့ကို ပွုပွငျတဲ့ပုဂ်ဖိုလျ၊ အသဈဆောကျလုပျလှူးဒါနျးတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျ။
၆။ ဗောဓိညောငျပငျ စိုကျပြိုးသောပုဂ်ဂိုလျ ညောငျရသှေနျးလောငျးသော ပုဂ်ဂိုလျ။
၇။ ရတှေငျး ရကေနျ ရအေိမျ စတုဒီသာ ကြောငျးဇရပျ တံတား ပွုပွငျသောပုဂ်ဂိုလျ အရုဏျဆှမျး နဆှေ့မျး လောငျလှူသော ပုဂ်ဖိုလျ။
၈။ ရဟနျး တို့အား ပစ်စညျးလေးပါး လှူဒါနျးထောကျပံ့သော ပုဂ်ဂိုလျ။
၉။ ကမ်မဋ်ဌာနျးဘာဝနာ ပှားမြားအားထုတျသော ပုဂ်ဂိုလျလျ
အားလုံး ဧကနျမုခြ မွကွေီး လကျခတျမလှဲ၊ အရိမတ်ေတယေဘြုရားရှငျကို ဖူးမွျောရပွီး နိဗ်ဗာနျကိုရမယျ။
ကြှနျတျောတို့ဟာ တကယျလို့ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှေ ဖွဈကွမယျဆိုရငျ ဟောဒီကမ်ဘာမှာ နောငျပှငျတျောမူမဲ့ မွတျစှာဘုရားအကွောငျးကို သိခငျြကွမယျလို့ထငျပါတယျ တခြို့လညျး သိပွီးဖွဈနကွေမှာပါ မသိရသေးတဲ့ သူတှအေတှကျ ဒီပိုဈ့လေးကိုတငျလိုကျတာပါ ဒီမေးလျလေးကို ပို့ပေးတဲ့ အရှငျဝိမလဝံသကို အထူးကြေးဇူးတငျပါသညျဘုရား။ နောငျပှငျ့တျောမူမညျ့ အရိမတ်ေတယေဘြုရားရှငျ ကို ရှိခိုးကနျ့တော့လိုကျပါတယျ ဘုရား
ကြှနျတျောတို့ နထေိုငျသောဟောဒီကမ်ဘာမှာဘုရားငါးဆူပှငျ့မယျလို့ မှတျသားကွားသိဖူးပါတယျ အခုဘုရားလေးဆူးပှငျ့ထှနျးပွီးပါပွီ နောငျပှငျ့လတ်တံသော မွတျစှာဘုရားမှာ အရိမတ်ေတယေဘြုရားရှငျ ဟုသိရပါတယျ။ ဗုဒ်ဓဘာသာတိုငျးရဲ့ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျးက နိဗ်ဗာနျဖွဈပါတယျ အလှနျကွညျညိုစရာကောငျးသောဘုရားရှငျရဲ့ တရားတျောအားနာကွားပွီး ရှတေ့ျောမှာတငျကြှတျတမျးဝငျ နိဗ်ဗာနျစံရမယျဆိုရငျ အကောငျးဆုံးပေါ့ဗြာ။”
အဲဒီအတှကျ ကြှနျတျောတိုဘုရားရှငျ ဟေားကွားခဲ့သညျ့အတိုငျး လိုကျလုပျဖို့ လိုပါတယျ …သုံးခကျြထဲပါ
၁။ မကောငျးမှု ကိုရှောငျရမယျ ။
၂။ ကောငျးမှု ကိုဆောငျပွီးအစဉျပွုလုပျနရေမယျ ။
၃။ စိတျကို ဖွူစငျအောငျထားရပါမယျ ။
ဂေါတမ မွတျစှာဘုရားရှငျက ကပ်ပိလဝတျပွညျ နိဂွောဓာရုံကြောငျးမှာ သီတငျးသုံးနတေဲ့အခြိနျ အရှငျသာရိပုတ်တရာ၏ လြှောကျထားခကျြအရ အရဟတ်တဖိုလျဈာနျသမာပတျ ဝငျစားပွီး အဇိတရဟနျး နောငျအနာဂတျကာလမှာ အရိမတ်ေတယေဘြုရား ဖွဈတျောမူမညျ့အကွောငျးကို ဟောကွားတျော မူပါတယျ။ အရိမတ်ေတယေဘြုရားလောငျးက တဈသင်ျခနြှေငျ့ ကမ်ဘာတဈသိနျး ပါရမီတှဖွေညျ့ကငျြ့ပွီး တုသိတာနတျပွညျမှာရှိနမေယျ။
အလောငျးတျောနတျသားက လူ့ပွညျကိုဆငျးပွီး ပဋိသန်ဓနေဖေို့ရာအတှကျ ဘုရားလောငျးတို့ရဲ့ ထုံးတမျးအစဉျအလာ ဓမ်မတာအရ ပဋိသန်ဓယေူတော့မယျဆိုရငျ ကွညျ့ခွငျးငါးပါး အရငျကွညျ့ပွီးမှ ပဋိသန်ဓယေူလရှေိ့ကွတယျ။
၁။ ဘုရားဖွဈမညျ့ခတျေအခါကာလကား အနှဈတဈသိနျးမှစပွီး အောကျဖွဈသောကာလ အနှဈတဈရာတနျးမှစပွီး အထကျဖွဈသောကာလ (တဈသိနျးနှငျ့ တဈသိနျးအောကျ- ၁၀၀အထကျ)
၂။ ဘုရားဖွဈရာကြှနျးကား ဇမ်ဗူဒိပျကြှနျး
၃။ ဘုရားပှငျ့ရာဒသေကား မဇ်ဈိမဒသေ
၄။ ဘုရားလောငျးဖွဈရာ အမြိုးကား မငျးမြိုး ပုဏ်ဏားမြိုး
ကတေုမတီပွညျ………..သင်ျခစကွဝတေးမငျးနှငျ့တိုငျပငျကွံစညျဘကျကိုးကှယျရာဖွဈသော အတိတျ အနာဂတျကိုသိမွငျနိုငျပွီးပစ်စုပနျသံသရာအစီးအပှားကို ဆုံးမတတျသော သုဗွဟ်မပုဏ်ဏားကွီး၏ ဗွဟ်မဏဝတီပုဏ်ဏေးမဝမျးမှာ ပဋိသန်ဓနေလေိမျ့မညျ။
ဗွဟ်မဏဝတီပုဏ်ဏေးမဝမျးမှာဆယျလပွညျ့တဲ့အခါမှာ ဣသိပတနေသမငျတောမှာ မယျတျော ဗွဟ်မဏဝတီသညျထိုငျလကျြလညျးမဟုတျ အိပျလကျြလညျးမဟုတျဘဲ ရပျလကျြသာလြှငျ သဈပငျ၏အကိုငျးအခကျကိုကိုငျလကျြ မတ်ေတယေကြိုဖှားတျောမူလိမျ့မညျ။ဘုရားလောငျးနဲ့အတူ တဈခြိနျတညျးဖှားတျောမူတဲ့ဖှားဘကျတျော ၁၈ ကုဋအေားလုံးအမတျတှခေညျြးဖွဈမယျ။ အဇိတဟူသောအမညျကိုသာပေးလိမျ့မယျ။ ဘုရားလောငျးအဇိတမငျးသားဟာဖှားလြှငျဖှားခငျြး ခုနဈဖဝါးလှမျးပွီး ခွတေျောခတြိုငျးခတြိုငျး ကွာပှငျ့တှပေျေါပေါကျလိမျ့မယျ။
ဖှားလြှငျဖှားခငျြး ခုနဈလှမျးလှမျးပွီး ယခုဘဝကား ငါ့အဖို့နောကျဆုံးဘဝတညျး နောကျထပျဘဝမရှိတော့ပွီ အာသဝေါကငျးသညျ ဖွဈသောကွောငျ့ငွိမျးအေးလတ်တံ့” ဟူသောစကားကိုအရပျလေးမကျြနှာကိုကွညျ့ပွီးပွောဆိုလိမျ့မယျ။
အဇိတမငျးသားလောကစညျးစိမျခံစားဖို့ရာနမေငျး၏ရောငျခွညျကဲ့သို့လူသားတှမေကျြစိဖွငျ့စိနျးစိနျးမကွညျ့ဝံ့တဲ့ အရောငျတလကျလကျဖွငျ့ ရတနာအရောငျထှနျးလငျးပွောငျတဲ့တငျ့တယျခံ့ညားသောပွာသာဒျလေးဆောငျပျေါပေါကျလာလိမျ့မညျ။ပွာသာဒျလေးဆောငျကို တဈဆောငျမှာ ပရိဘောဂအသုံးအဆောငျ အပွညျ့အစုံပါတဲ့တိုကျခနျးက ခုနဈထောငျစီ တဈဖကျတဈဖကျမှာ ပတ်တမွားကြောကျမကျြရှဲစီသောနဝရတျကိုးပါးနဲ့ ပွညျ့စုံသော ပလ်လငျခုနဈထောငျစီ ရတနာခုနဈပါးနှငျ့ပွညျ့စုံသော ထီးဖွူခုနဈထောငျစီ ခုတငျညောငျစောငျးခုနဈထောငျစီ ပွာသာဒျတဈဆောငျကို တိုကျခနျးက
ခုနဈထောငျစီဆိုတော့ ပွာသာဒျလေးဆောငျဆိုရငျ တိုကျခနျးပေါငျး ၂၈၀၀၀ ရှိမယျ။ ပွာသာဒျတဈဆောငျတဈဆောငျကို ရှအေိုးကွီးကတဈလုံးစီ။
ရှအေိုးတဈလုံးစီရဲ့အဝကား တဈယူဇနာကယျြမယျ။ ရှအေိုး၏အမောကျကား မွကွေီးနဲ့အမြှအောကျမွကွေီးအဆုံးထိ သုံးလို့မကုနျဘူး။ ဒါတငျမကသေးဘူး
ရှအေိုးတဈလုံးစီမှာ ပဒသောပငျကွီးခွောကျပငျစီ ပေါကျလိမျ့မယျ။ ပွာသာဒျတဈဆောငျ တဈဆောငျမှာ ဆဒ်ဒနျဆငျမငျးခုနဈထောငျ လောဟကသိန်ဓောမွငျး တဈထောငျဖွငျ့ မောငျးနှငျရသောရထားခုနဈရာ မောငျးမပေါငျးတဈသောငျးခွောကျထောငျက ဆိုတီးမှုတျဖွဖြေျောဖို့ရာ
အခြိနျတနျလို့အရှယျရောကျတဲ့အခါ စန်ဒမုက်ခီအမြိုးသမီးနဲ့အိမျ ထောငျပွုလိမျ့မညျ။ စန်ဒမုက်ခီအမြိုးသမီးကလညျး သူမတူ နတျသမီးတမြှအလှနျလှပပွီး သူ့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျအနံ့ကား စန်ဒကူးသရက်ခနျအနံ့လိုမှေးကွိုငျနမေယျ။ ခန်ဓာကိုယျအသားကလညျး ဝါဂှမျးကဲ့သို့ နူးညံ့မယျ။ ခန်ဓာကိုယျအရောငျက ဆယျ့နှဈတောငျအတှငျး မီးမထှနျးဘဲ အရောငျတဝငျးဝငျးထိနျနမေယျ။ အရိမတ်ေတယေဘြုရားရှငျဟာဘယျလောကျဘုနျးကွီးလိုကျမလဲဆိုတာ ရှငျဘုရငျမဟုတျဘဲနဲ့ အဇိတမငျးသားဘဝလောကျရှိတာတောငျမှသင်ျခစကွဝတေးမငျးနှငျ့တကှ မွို့ပေါငျးရှဈသောငျးလေးထောငျက ရှငျဘုရငျတှနေတျသားတှကေ ဝယေဝြစ်စလုပျပေးခငျြလို့ပွုလုပျခှငျ့ပေးဖို့လာပွီးတောငျးပနျကွတယျတဲ့။ အဇိတမငျးသားက အကြှနျုပျမှာ ဖှားဘကျတျော ၁၈ ကုဋအေမတျကွီးနှငျ့တကှ ဆငျမွငျးရဲမကျဗိုလျပါတှေ ရှိပါတယျ။ အလိုမရှိတော့ပါဟု ပွောလှတျလိမျ့မယျ။
အဇိတမငျးသားဟာ ပွသာဒျလေးဆောငျမှာ လောကီစညျးစိမျခံစားနစေဉျမှာ အနှဈတဈသောငျးပွညျ့တဲ့အခါကရြငျ ဗွဟ်မာဝံသ ဆိုတဲ့
ဗွဟ်မာဝံသ သားယောကျြားလေးမှေးဖှားပွီးတဲ့အခါ ဘုရားရှငျတို့ရဲ့ ထုံးတမျးစဉျလာ ဓမ်မတာအရ ဥယြာဉျကထှကျစဉျမှာ သူအို သူနာ သူသေ ရဟနျး
နိမိတျကွီးလေးပါးတှမွေ့ငျရရငျ သံဝဂေတရားတှရေလာပွီးတော့ တောထှကျမညျ့အကွံဖွဈပျေါလာလိမျ့မညျ။ ဒိဗြာဝဒါန မတ်ေတယေဗြာကရဏဝဒါန (၃၆-၃၇) မှာပွဆိုထားတာကတော့ သင်ျခမငျး၏ ယဇျတိုငျအပိုငျးပိုငျးပွတျသညျကို မွငျရပွီး သံဝဂေဖွဈပွီးတောထှကျလိမျ့မညျလို့ပွဆိုထားတာရှိသေးတယျ။ ဘယျလိုပုံနညျးနဲ့ဖွဈဖွဈ တောကတော့ထှကျမှာပါပဲ။ အဇိတမငျးသား တောထှကျမယျ့အကွံစိတျကို သင်ျခစကွဝတေးမငျးက သိတဲ့အခါ အဇိတမငျးသားပြျောအောငျဆိုပွီးတော့ ရှဈသောငျးလေးထောငျသော ကခသြေညျတှမွေို့သူ မွို့သား နိဂုံးဇနပုဒျသူ မငျးသားမငျးမွေး သူဌေး သူကွှယျစသော လူအပေါငျးတို့က ပနျးနံ့သာစှဲလကျြ အဇိတမငျးသားကို ခွံရံပွီးနကွေလိမျ့မယျ။ နတျဗွဟ်မာတှကေလညျး နတျတို့ရဲ့ ထီး တံခှနျ ပနျးနံ့သာ ရှပေေါကျပေါကျ ငှပေေါကျပေါကျ စသညျတို့ဖွငျ့ ဘုရားလောငျးပွာသာဒျ မိုးကွီးရှာသကဲ့သို့ အပွညျ့အလြှံခွံရံခစားနကွေလိမျ့မယျ။ လူ့ဘဝကာမဂုဏျထဲမှာပြျောအောငျဖွဖြေျောနကွေတာ။
အဇိတမငျးသား တောထှကျမယျဆိုတဲ့ စိတျအကွံကို သင်ျခစကွဝတေးမငျးနှငျ့တကှ တိုငျးသူပွညျသား လုတှအေားလုံးသိသှားကွတဲ့အခါမှာ ဘယျနေ့ ဘယျရကျ ဘယျအခြိနျမှာ အဇိတမငျး တောထှကျမယျဆိုတဲ့ သတငျးအသံကို အားလုံးသိသှားကွတော့ နနျးတှငျးသူ နနျးတှငျးသား မွို့သူမွို့သားတှေ တောရှာဇနပုဒျက လူတှေ မငျးသား မငျးမွေး သူဌေး သူကွှယျအစရှိတဲ့ လူပေါငျးမြားစှာနှငျ့တကှ စန်ဒမုက်ခီ သားတျော ဗွဟ်မာဝံသ အလုပျအကြှေးကခသြေညျတှရေော အဇိမငျးရဲ့ ပွာသာဒျထဲမှာ တောထှကျရငျလိုကျဖို့ရာအတှကျပွညျ့လြှံပွီးတော့နမေယျ။ တောထှကျမညျ့ အခြိနျလညျးရောကျရော လူပေါငျးမြားစှာပွညျ့နတေဲ့ ပွာသာဒျကွီးဟာ ဘုရားလောငျးတနျခိုးတျောကွာငျ့လညျးကောငျး စကွဝတေးမငျးအာဏာကွောငျ့လညျးကောငျး နတျဗွဟ်မာတို့ တနျခိုးတျောကွောငျ့လညျးကောငျး ဟသာင်္မငျးပြံသကဲ့သို့ ကောငျးကငျယံသို့ပြံတကျပွီး ကံ့ကျောပငျရှိရာအရပျသို့ ကောငျးကငျယံခရီးဖွငျ့ တောထှကျသှားကွလိမျ့မယျ။ နတျဗွဟ်မာမြား ပို့ဆောငျခွငျး ကောငျးကငျယံ ဟသာင်္ပြံ ပွာသာဒျကွီးကို ဗွဟ်မာမငျးက သုံးယူဇနာ ရှိသောထီးကိုကိုငျပွီး လိုကျမယျ။ သိကွားမငျးက အတောငျခွောကျဆယျရှိသော လကျယာရဈ ခရုသငျးကိုကိုငျလကျြ သာဓု သုံးကွိမျချေါပွီးလိုကျမယျ။ သုတဝံနတျသားက သားမွီးယပျကိုကိုငျပွီးလိုကျမယျ။ တုသိတာနတျသားက ပတ်တမွားယပျကိုကိုငျပွီးလိုကျမယျ။ ပဉ်စင်ျသိခနတျသားက စောငျးကိုကိုငျမယျ။ လောကပါလနတျသားလေးယောကျက သနျလကျြကိုကိုငျမယျ။ နှဈသိနျးရှဈသောငျးရှိတဲ့ ဘီလူးစဈသညျတှကေ လကျနကျကိုယျစီကိုငျမယျ။ နတျသမီးတှကေ ရတနာပုဋောငျးကိုကိုငျမယျ။ အသူရာနတျတို့က သီခငျြးဆိုပွီးတော့ နတျတို့၏ တံခှနျကိုကိုငျမယျ။ နတျမငျးတို့က ပတ်တမွားရှိသော ဆီမီးကိုကိုငျမယျ။ ဂဠုနျတို့က စောငျးတီးလိုကျမယျ။ ဂန်ဓဗ်ဗနတျတို့က စောငျးတီးပွီးလိုကျမယျ။ ဟသာင်္ပြံကောငျးကငျပွာသာဒျထဲမှာ တောထှကျလို့ လိုကျကွမညျ့ ပရိသတျတှကေ ရှဈသောငျးလေးထောငျတဲ့။ ကောငျးကငျယံပွာသာဒျပြံနဲ့ ဆှစေုံမြိုးစုံ သားနဲ့ မယားနဲ့ ရှဈသောငျးလေးထောငျပရိသတျနဲ့ အခွံအရံနဲ့ ကောငျးကငျခရီးဖွငျ့ ကံ့ကျောပငျရှိရာသို့ တောထှကျမှာ။ အရိမတ်ေတယေဘြုရားရှငျဟာ ကံ့ကျောပငျအောကျမှာပှငျ့မှာပါ။ ကံ့ကျောပငျဆီရောကျတဲ့အခါမှာ အဇိတမငျးသားက ကံ့ကျောပငျအောကျမှာ ဒုက်ကခရစရိယာကို ကငျြ့တျောမူပါမယျ။ အဇိတမငျးသားဟာ ဒုက်ကခရစရိယာကို ခွောကျရကျကငျြ့တျောမူရုံမြှနဲ့ ဘုရားစငျစဈဖွဈလိမျ့မညျ။ စန်ဒမုက်ခီမိဖုရားက အဲဒီနရောမှာပဲ နတျသွဇာနဲ့ပွညျ့စုံတဲ့ နှားနို့ဆှမျးလှုလိမျ့မယျ။
ညနခေမျြးအခြိနျရောကျသညျ့အခါ ကံ့ကျောပငျနဲ့ မနီးမဝေး ရတနာခုနဈပါးနဲ့ပွညျ့စုံတဲ့ အမွငျ့ ၆၄တောငျရှိတဲ့ ရှပေလ်လငျပျေါပေါကျလာလိမျ့မယျ။ ထိုရှပေလ်လငျအထကျဝယျ ထကျဝကျဖှဲ့ခှထေိုငျနတေျောမူလကျြ အရှလေ့ောကဓာတျကိုကွညျ့ပွီး နတျပရိသတျနဲ့ လူပရိသတျတှခွေံရံလကျြ မာရျနတျရဲ့ရနျကိုအောငျမွငျလိမျ့မယျ။ ညဉျ့ဦးယံမှာ ပုဗ်ဗနေိဝါသနုဿတိဉာဏျကိုရမယျ။ သနျးခေါငျယံအခြိနျမှာ ဒိဗ်ဗစက်ခုဉာဏျကိုရမယျ။ မိုးသောကျယံအခြိနျ အာသဝက်ခယဉာဏျတှရေပွီးတော့ နဝေနျးကွီးပျေါပေါကျလာတဲ့အခြိနျကတြော့ သစ်စာလေးပါးကိုသိပွီး သဗ်ဗညုတဉာဏျကိုရမယျ။
ဘုရားပှငျ့တဲ့ကံ့ကျောပငျရဲ့ လုံးပတျက အဲဒီခတျေအခါမှာ လူတှရေဲ့ အတောငျနဲ့ အတောငျခုနဈဆယျရှိမယျ။ အကိုငျးအခကျ ကိုးကိုငျး ခကျမကိုးဖွာလို့ချေါတယျ။ ကံ့ကျောပငျရဲ့ အနံ့တှကေ လအေောကျကိုဆယျယူဇနာ လအေထကျကို ဆယျယူဇနာမှေးမယျ။ ကံ့ကျောပှငျ့တှကေ နှားလှညျးဘီးလောကျကွီးမယျ။ ဘုရားဖွဈတဲ့နကေ့စပွီး ပှငျ့ကွတဲ့ ကံ့ကျောပှငျ့တှဟော ဘုရားပရိနိဗ်ဗာနျစံတဲ့နကေ့မြှ ကွှကွေတော့မှာ။ အဲဒီကံ့ကျောပငျကို ဘယျငှကျမှ မနားဝံ့ကွဘူး။ ဖွတျကြျောမပြံ့ဝံ့ကွဘူး။ ကံ့ကျောပငျးနားရောကျတဲ့ငှကျတိုငျး သတ်တဝါတိုငျး ကံ့ကျောပငျကို လကျယာရဈသုံးပတျပတျပွီးမှ သှားကွလိမျ့မယျ။ ဗွဟ်မာမငျးက တရားဟောရနျ တောငျးပနျခွငျး အဲဒီကံ့ကျောပငျရဲ့ အနီးအနားမှာပဲ သီတငျးသုံးနတေဲ့အခြိနျ လေးဆယျ့ကိုးရကျကြျောလှနျတဲ့အခါ ပှငျ့တျောမူသှားကွတဲ့ ဘုရားရှငျတိုငျးရဲ့ ထုံးတမျးအစဉျအလာအရ ဗွဟ်မာမငျးကွီးရဲ့လောကဂရုကို ခံယူမယျ။ ဗွဟ်မာမငျးကတောငျးပနျမှ တရားဟောရတာက ပှငျ့တျောမူသှားကွတဲ့ ဘုရားရှငျတိုငျးရဲ့ ဓမ်မတာဖွဈလို့ ဟောရတာ။ ဘုရားမပှငျ့မီ ဗာဟိရကာလမှ လူဝတျကွောငျမြား ရသေ့ ပရိဗိုဇျ ရဟနျး ပုဏ်ဏားတို့တှဟော ဗွဟ်မာတှကေိုသာ အလေးဂရုပွု ကိုးကှယျနကွေတာ။ တလောကလုံးက အလေးအမွတျပွုသော ဗွဟ်မာကွီးက မွတျစှာဘုရားအား အလေးပွု ညှတျတှားကိုငျးရှိုငျးလာလြှငျ တဈလောကလုံးပငျ မွတျစှာဘုရား ကို အလေးပွုညှတျတှားကိုငျးရှိုငျးလာလိမျ့မယျ။ အဲဒါကို လောကဂရု ယူလိုကျတာလို့ချေါတယျ။
ဗွဟ်မာမငျးထံမှ တရားဟောရနျဝနျခံပွီးပွီဆိုလြှငျပဲ ဣသိပတနဥယြာဉျတောသို့ ဓမ်မစကွာတရားဟောဖို့ရနျကွှလိမျ့မယျ။ ဘုရားရှငျခွတေျောအစုံကို ခံအံ့သောငှာ မွကွေီးကိုခှငျးပွီး အတောငျသုံးဆယျရှိတဲ့ ကွာပှငျ့ကွီး ၂၄ တောငျရှိတဲ့ ကွာပှငျ့ငယျတှကေ ဘုရားရှငျခွခေတြိုငျး ခွခေတြိုငျး ပှငျ့ပေးလိမျ့မယျ။ လူပရိသတျ ရှဈယူဇနာ နတျပရိသတျ စကွာဝဠာတိုကျအပွညျ့ ဗွဟ်မာပွညျအထကျဆုံး အကနိဋ်ဌဘုံတိုငျအောငျ ပရိသတျတှကေို ထနျးသီးလုံးလောကျကွီးသော ရောငျခွညျတျော ခွောကျပါးလှတျပွီး ဓမ်မစကွာတရားဟောတဲ့အခါမှာ လူပုဂ်ဂိုလျ ကုဋတေဈသိနျး နတျဗွဟ်မာတှကေ ကုဋတေဈသိနျး ကြှတျတမျးဝငျကွလိမျ့မယျ။
ဘုရားရှငျ၏တနျခိုးတျောကွောငျ့ ရှပေနျးဆိုငျး ငှပေနျးဆိုငျး ပုလဲပနျးဆိုငျး သန်တာပနျးဆိုငျးတို့ဖွငျ့ တနျဆာဆငျလကျြ ရတနာခုနဈပါးနှငျ့ ပွညျ့စုံပွီး ဆယျ့နှဈယူဇနာကယျြဝနျးတဲ့ ဗိမာနျမကျြနှာကကျြသညျ ဓမ်မစကွာတရားဦးဟောသညျ့နမှေ့စပွီး ပရိနိဗ်ဗာနျဝငျစံသညျ့တိုငျအောငျ နညေ့အမွဲပငျလိုကျပါပွီး မကျြနှာကကျြအဖွဈ မိုးကာပွီးနမေယျ။ အရိမတ်ေတယေဘြုရား နသေနျ့စငျသောအခါ နဖေို့ရာအတှကျ မွကွေီးတို့ကိုခှဲပွီး ရတနာသုံးပါးနှငျ့ပွညျ့စုံသော ၁၂ ယူဇနာကယျြဝနျးတဲ့ ရှမေဏ်ဍပျကွီးပျေါပေါကျလိမျ့မယျ။ ဘုရားရှငျတနျခိုးတျောကွောငျ့ မိတာနျပနျးဆိုငျး တုရငျတိုငျ ထီး တံခှနျ ဆီမီး တနျဆောငျး ရတနာမဏ်ဍပျကွီးဟာ ဘုရားရှငျတရားဟောရာ ဌာနတိုငျးမှာ အိမျမှာဟောမယျဆိုရငျ အိမျပေါကျဝ ကြောငျးမှာဟောမယျဆိုရငျ ကြောငျးပေါကျဝ မွို့မှာဟောမယျဆိုရငျ မွို့မှာ တောမှာဟောမယျဆိုရငျ တောမှာ စတဲ့ ဟောတဲ့နရောတိုငျးမှာ ကောငျးကငျယံကနပွေီး အမွဲတမျး ပရိနိဗ်ဗာနျစံအထိ လိုကျပါနမှော။
အရိမတ်ေတယြေ ဘုရား တရားဟောတဲ့အခါ ဘယျမွို့ ဘယျဒသေ ဘယျအရပျ ဘယျရှာဒသေ ဇနပုဒျ အိမျကပဲဟောဟော စကွဝဠာတိုကျတဈသောငျးလုံး ဘုရားရှငျရဲ့ တရားဟောအသံကိုကွားနရေမယျ။ ဘုရားရှငျရဲ့ ပုံသဏ်ဌာနျကိုလညျးမွငျနရေမယျ။ ရုပျလညျးမွငျရမယျ အသံလညျးကွားရမယျ။ မမွငျခငျြလို့ မကျြစိမှိတျထားလညျး မရဘူး။ မကွားခငျြလို့နားပိတျထားလညျးမရဘူး။ ဘုရားရှငျရဲ့တနျခိုးတျောကွောငျ့ ၃၁ ဘုံအကာအရံမရှိ ဖီလာထုတျခငျြးပေါကျမွငျကွရမှာ။ အပျေါကွညျ့ရငျ နတျသား နတျသမီး ဗွဟ်မာတှမွေငျရမယျ။ အောကျငုံ့ကွညျ့ရငျ ငရဲပွညျမှာ ခံစားနရေတဲ့ ငရဲဒုက်ခမြိုးစုံကိုမွငျရတော့ ငရဲရောကျအောငျ အကုသိုလျတှပွေုရဲဖို့မရှိတော့ဘူး။ အရိမတ်ေတယေဘြုရားရှငျရဲ့တနျခိုးတျောကွောငျ့ ယောကျြားဆိုရငျ နတျသားလို မိနျးမဆိုရငျ နတျသမီးလို ခြောမောလှပတှခေညျြးဖွဈရာ ရုပျမခြော အင်ျဂါမစုံတဈယောကျမှမရှိ။ အကုနျးအကှ အကနျး အနူအဝဲရောဂါသညျတှေ လုံးဝမရှိ။ အသကျငါးရာပွညျ့တဲ့အရှယျရောကျရငျ အမြိုးသား အမြိုးသမီးတှေ အိမျထောငျပွုကွလိမျ့မယျ။ ဇနီးမောငျနှံနှဈဦး ခိုကျရနျဒေါသမရှိ ပွဿနာမရှိ ကှဲကှာသှားခွငျးလညျးမရှိ။ အမွဲအဆငျပွမေယျ။ ရာသကျပနျပေါငျးသငျးရမယျ။ အမြိုးသမီးတိုငျးမှာ ပတ်တမွားနားတောငျး လကျစှပျ လကျကောကျ ခွကေငျြးစသညျတို့ဟာ ရှအေိုးကွီးတှထေဲက ကွိုကျနှဈသကျရာ ယူဝတျကွမှာ။ ရှမေဝတျနိုငျတဲ့သူမရှိဘူးတဲ့။ စားစရာပဒသောပငျတှမှော ယူစားခငျြတဲ့အခြိနျယူစားလို့ရတယျ။ ကနျြးမာရေးအနနေဲ့ကွညျ့မယျဆိုရငျလညျး ဘာရောဂါမှကိုမရှိဘူး။ နညေ့ခှဲမရ အရိမတ်ေတယေဘြုရားရှငျရဲ့ တနျခိုးတျောကွောငျ့ ကမ်ဘာလောကွီးဟာ နအေ့ခါ ညအခါရယျလို့မရှိ နရေ့ောညပါ အမွဲတမျးလငျးထိနျပွီးတော့ မနကျပှငျ့တဲ့ပနျး ညပှငျ့တဲ့ပနျး မနကျပနျး ညပနျး ကွကျတှနျသံတှကေို ကွညျ့ရှုနားထောငျပွီး နညေ့ခှဲယူရလိမျ့မယျ။ ပရိနိဗ်ဗာနျစံမညျ့အရှယျ မွတျစှာဘုရားရှငျဟာ ဘုရားဖွဈတျောမူပွီးတဲ့အခြိနျကစပွီး ကုဋခေုနဈရာသော ပရိသတျတို့ကို ခခြှေတျတျောမူပွီးလြှငျ အနှဈရှဈသောငျးပွညျ့တဲ့အခြိနျမှာ
ပရိနိဗ်ဗာနျစံဝငျလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ သာသနာတျောက အနှဈနှဈသိနျးခွောကျသောငျး ပွညျ့တဲ့အခါ ဘဒ်ဒကမ်ဘာကွီးသညျ အခြိနျတနျလြှငျ ပကျြပွီး ကမ်ဘာတဈသိနျးကာလလုံး ဘုရား မပှငျ့တော့ဘူးတဲ့။ ဘုရားမပှငျ့တဲ့ ကမ်ဘာတဈသိနျးကြျောလှနျသောအခါ မဏ်ဍကမ်ဘာဖွဈပွီးတော့ ဥတ်တရာမမငျးသညျ ရာမသမ်ဗုဒ်ဓဘုရားဖွဈလိမျ့မယျ။ ပသနေဒီကောသလမငျးက ဓမ်မရာဇာဘုရားဖွဈလိမျ့မယျ။ အဲဒီ မဏ်ဍကမ်ဘာမှာဘုရားနှဈဆူပှငျ့ပွီးပကျြစီးသှားတဲ့အခါ သာရကမ်ဘာဖွဈပျေါပွီး အဘိဘူဘုရားတဈဆူသာပှငျ့လိမျ့မယျ။ သာရကမ်ဘာပကျြပွီး ကမ်ဘာတဈသိနျးဘုရားမပှငျ့ဘဲနပွေီးတော့ ကမ်ဘာတဈသိနျးကြျောလှနျသောအခါ ဖွဈပျေါလာမယျ့ ကမ်ဘာမြားမှာ ဒီဃသောနိအသူရိနျနတျသား စန်ဒနီပုဏ်ဏား၊ သုဘလုလငျ တောဒယေပြုဏ်ဏား ၊ နာဠာဂီရိဆငျမငျး ပလလယေဆငျမငျးတို့ အစဉျအတိုငျး ဘုရားဖွဈလိမျ့မယျ။ အရိမတ်ေတယေဘြုရားဖူးမွျောရနျ ပွုလုပျရမညျ့ကုသိုလျ ယခုကွုံတှနေ့ရေတဲ့ ဂေါတမမွတျစှာဘုရား သာသနာကာလအတှငျးမှာ ကိုယျတိုငျ ရဟနျးသာမဏေ သီလရှငျဝတျပွီး ပရိယတျ ပဋိပတျ သာသနာပွုနတေဲ့ပုဂ်ဂိုလျ မိမိရငျမှဖွဈတဲ့သား သူတဈပါးရငျမှဖွဈတဲ့သားတှကေို ရဟနျးခံပေးခွငျး ရှငျပွုပေးခွငျးပွုတဲ့ပုဂ်ဂိုလျ မိခငျဖခငျကြေးဇူးရှငျတှကေို ဝတျကတြေမျးကမြေဟုတျဘဲ စိတျပါလကျပါပွုစုလုပျကြှေးသောပုဂ်ဂိုလျ သရဏဂုံသီလမပွတျဆောကျတညျသောပုဂ်ဂိုလျ ဘုရားသာသနာတညျစိမျ့သောငှာ စတေီပုထိုး စညျးခုံ ဥမငျလိုဏျခေါငျး ဇရပျစသညျတို့ကို ပွုပွငျတဲ့ပုဂ်ဂိုလျ အသဈဆောကျလုပျလှုဒါနျးတဲ့ပုဂ်ဂိုလျ ဗောဓိညောငျပငျစိုကျပြိုးသောပုဂ်ဂိုလျ ညောငျရသှေနျးလောငျးသောပုဂ်ဂိုလျ ရတှေငျး ရအေိုငျ ရကေနျ စတုဒိသာကြောငျးဇရပျ တံတာွး့ပုပွငျသောပ်ုဂိုလျ အရုဏျဆှမျး နဆှေ့မျးမပွတျလောငျးလှုသောပုဂ်ဂိုလျ ရဟနျးတို့အားပစ်စညျးလေးပါးတို့ဖွငျ့ထောကျပံ့လှုဒါနျးသောပုဂ်ဂိုလျ ကမ်မဌာနျးဘာဝနာပှားမြားအားထုတျသောပုဂ်ဂိုလျ…. အဲဒီ ပုဂ်ဂိုလျတှအေားလုံး ဧကနျမုခြ မလှဲမသှေ မွကွေီးလကျခတျမလှဲ အရိမတ်ေတယေမြွတျစှာဘုရားကို ဖူးမွျောရပွီး နိဗ်ဗာနျကိုရမယျ။ အဲဒါက ဂေါတမမွတျစှာဘုရားကိုယျတိုငျပွောပွခဲ့တဲ့ ကုသိုလျတှဖွေဈပါတယျ။
အရိမတ်ေတယြေ မွတျစှာဘုရား လောငျးပွောပွခဲ့တဲ့ ကုသိုလျ တှကေတော့….. မဟာဝသေန်တရာဇာတျတျောကို နခေ့ငျြးကုနျအောငျနာကွားကွသောသူတို့သညျ ကြှနျုပျဘုရားမဖွဈမီအကွား သံသရာ၌ ကငျြလညျလသေမြှမှာလညျး စိတျနှငျ့ကိုယျကို အစိုးရ၍ လူကောငျး နတျကောငျး စညျးစိမျကောငျးကို ခံစားရပွီး ကြှနျုပျဘုရားဖွဈသောအခါ ရှေးဦးစှာ ဖူးတှရေ့၍ ပဋိသမ်ဘိဒါပညာလေးပါးနှငျ့တကှ ရဟန်တာ အဖွဈကို မခြှတျမလှဲရနိုငျပါလိမျ့မယျလို့ ရှငျမာလဲမထရျေမွတျအား အရိမတ်ေတယေမြွတျစှာဘုရားလောငျးက ပွောပွတျောမူခဲ့ပါတယျ။
ရှာလကာရည်ကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၁၀) မျိုး
အတုယူသင့်တဲ့ ဂျူးလူမျိုးများ၏ ကလေး ပျိုးထောင်နည်း